GOOBAHA DAGAALKA: SHANTA Meelood Ee Laga Go'aaminayo Guusha Caawa, 10ka Ciyaartoy Ee Kulanka Iyo Xogta Xiddigaha Foodda Is Daraya - Gool24.Net
Sannad iyo saddex bilood kaddib ayaa finalka Champions League la ciyaarayaa, waxaana markan iskugu yimid laba kooxood oo aan waligood marxaladdan oo kale isku arag, waana Bayern Munich oo shan jeer oo hor ekusoo guuleysatay iyo Paris Saint-Germain oo markii ugu horreysay final soo gaadhay.
Labaduba, Munich iyo Paris, waxay ku jiraan xilli ciyaareed aad ugu wanaagsan oo mid walba ay kusoo guuleysatay dhamaan koobabkii laga ciyaarayay waddankeeda, waxaana kaliya ay u baahan yihiin koobka kaliya ee u dhiman dhamaan tartamadii ay ka qayb-galeen oo ah Champions League oo ay midkood calfan doonto caawa.
Bayern Muncih waxay tahay kooxdii ugu wanaagsanayd tartanka Champions League ee xili ciyaareedkan, sababtoo ah, dhamaan 10kii ciyaarood ee ay soo dheeshay way soo wada guuleysatay waxaanay naadiyado waaweyn kusoo garaacday goolal tiro badan. Marka la isku geeyo goolasha ay xiddigaha Munich soo dhaliyeen tobankaas kulan, waa 42 gool, waana in ka badan 4 gool ciyaar kasta.
Paris Saint-Germain ayaa iyaduna soo qaadday tallaabadii ugu weynayd ee xirfaddeeda, waxaanay hore uga ruqaansatay rikoodhkeedii sannadkii 1995kii oo ay soo gaadhay semi-finalka, balse markan waxay joogtaa Final oo ay Munich ku waajahaysaa.
Weerarka halista ah ee ay haysato PSG ee ay ka midka yihiin Neymar iyo Kylian Mbappe ayaa soo cabsi gelinayay kooxihii Yurub ee ay lasoo ciyaareen, waxaanay soo ciqaabeen naadiyo ay ka mid ahaayeen Real Madrid iyo Borussia Dortmund.
Wax kasta oo Tuchel iyo Flick ay soo sameeyeen, guul kasta oo ay soo gaadheen, waxa caawa uu dagaalku yaallaa dhexdooda, iyaga ayaanu midkood farxi doonaa, midka kalena ooyi doonaa.
Kulankan xaasaasiga ah, waxa laga go’aamin doonaa shan meelood oo naadiga ku awood sarreeyaa uu dhab ahaantii farxadda koobka iyo guusha u dabbaal-degi doonaa, halka naadiga lagu jabiyana ay ciyaartoydiisu garoonka dhexdiisa ka ooyi doonaan.
Sidii aad hore nooga barateen ka hor kulamada muhiimka ah, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa shanta meelood ee ciyaartan natiijadeeda laga go’aamin doono iyo xiddigaha ku lug yeelan doona ee dagaalka ugu adag garoonka dhexdiisa iskula ballansan.
5. Thomas Muller vs Marquinhos
Kaddib markii uu soo jabiyey tiro rikoodho caawinta goolasha ee horyaalka Bundesliga ah, Thomas Muller waxa uu mucjisadiisa kasii watay tartanka Champions League toddobaadyadii ugu dambeeyey. Sida caadiga ah, waxa uu halyeygan reer Germany ka ciyaari jiray dhexda hore ee weerar caawinta ama weerarka beenta ah, laakiin tababare Hansi Flick ayaa u dejiyey khiddada kale oo ciyaartiisa sare usii qaadday, waxaanu u fasaxay inuu ka ciyaaro meesha uu doono oo aan lagu koobin boos kaliya, taas oo keentay inuu marna weerar toos ah noqdo, haddana khadka dhexe yimaaddo, garabka tago marka kooxdiisu wiiqanto, isla markaana uu xorriyad buuxda ka haysto garoonka dhexdiisa oo marba meesha u naadiga ka caawin karayo uu tago.
Thomas Muller wuxuu ahaa xiddigii fadeexadda ku riday Barcelona kulankii wareegga siddeedda, waxaanu ka dhaliyey laba gool iyo fursado badan oo uu abuuray. Laacibkan hore ugu guuleystay koobka adduunka, waxa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay ciyaartoyda ugu maskaxda badan dunida ee waqtigan garoomada kusii jira, waxaana uu caawa dhexda u xidhanayaa sidii uu kooxdiisa uga caawin lahaa khadka dhexe, isla markaana uu u jabin lahaa ciyaartoyda PSG ee iyaguna isku diyaariyey inay iska caabbiyaan.
Waxay si toos ah isku haleeli doonaan Marquinhos oo ah qofka ugu habboon ee tababaraha PSG uu kusoo ballamin doono inuu xakameeyo Thomas Muller, isla markaana khadka dhexe ee difaaca raacsan istaagi doona.
Xiddiga reer Brazil ee Marquinhos waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda boosaska badan ka ciyaar ee PSG ay ku najaxday, waxaanay maskaxdiisu ku foogan tahay inay ilaaliso difaacyahannada iyo goolka oo uu khataraha isku dhigo, halka uu Muller diiradda saaro inuu goolka gaadho oo uu dhaliyo ama uu kubbadda ku habo xiddigaha isaga kasii horreeya.
Dagaalka labadan ciyaartoy, waxa uu go’aamin doonaa kooxda gacanta ku qabanaysa khadka dhexe ee awoodda u yeelan doonta in si fudud goolkeeda loo gaadho. Haddii Muller uu sidii Barcelona oo kale u jabsado booskan, waxay Munich fursado u heli doontaa inay dhaliso goolal badan, laakiin haddii uu Marquinhos aamusiiyo Muller, waxa kooxda reer Germany dumi doonta qayb weyn oo ay guusha ka sugayeen.
Riix 2 & 3 si aad u wada akhrisato